Xujeyda Muslimiinta oo maanta bilaabaya gudasha Acmaasha Xajka.
Sunday July 18, 2021 - 14:47:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xujeyda Beytka Alle ayaa bilaabaya acmaasha xajka, maanta ayay xujeydu udhaqaaqeeen mash-carka Mina si ay ugutuaan yowmu tarwiyah ka hor inta aysan berri ujihaysan Banka carafo halkaas oo ay ku gudan doonaan rukniga ugu weyn fariidada xajka.
gelinkii dambe ee maalintii sabtiga ayay xujaajtu sameeyeen dawaaful quduum kaasi oo hordhac u ahaa bilaabashada maasikta xajka.
Majmuucaad aad uyar oo xujey ah ayaa la arkayay iyagoo kusii qulqulaya goobaha barakaysan, sanadkaan waxaa aad uyar muslimiinta xajka gudanaya sababa laxiriira dowladda Aala Sacuud oo aad uxadidday iyadoo ku marmarsiyoonaysa Caabuqa covid19.
Dadkan sanadkan gudanaya waajibka xajka ayaa lagusoo koobay 6000 oo ah dadka kasoo jeeda dhulka xarameynka iyo kuwa deggan.
marka loo barbar dhigno tirada dadkii xajiyay sanaddii 2019 oo gaaraysay 2.5 malyuun tirada sanadkaan waa mid aad uyar.
War kasoo baxay wasaaradda xajka sacuudiga ayaa lagu sheegay in daruuri ay tahay in dadka gudanaya xajka ay ka caafimaad qabaan cudurrada joogtada ayna dad'doodu udhaxayso 18 sano illaa 65 sano.
Sawirro: Wararkii ugu dambeeyay ee Xasuuqa lagu hayo muslimiinta Qaza.
Faransiiska oo Muslimiinta ka mamnuucay Gowraca Xalaasha ah ee digaagga.
Dowladda Sirilaanka oo qaadday olole ka dhan ah Muslimiinta tirada yar [Warbixin].